Ny fampiharana tsara indrindra hijerena antontan-taratasy amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ny fampiharana tsara indrindra hijerena antontan-taratasy amin'ny iPhone-nao
Ireo scanner document dia fitaovana efa tsy ilaina intsony. Indrindra satria ny kalitaon'ny rakitra PDF izay avoaka amintsika matetika dia tsy mihoatra ny kalitaon'ny sarin'ilay rakitra. Na izany aza, ny olana amin'ny sary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia ny endrika tsara indrindra handefasana sy handraisana antontan-taratasy dia PDF, ankoatry ny olan'ny fanitsiana sy ny famirapiratana.
Ho an'izany rehetra izany manana andiana safidy hafa izahay hijerena antontan-taratasy mivantana avy amin'ny iPhone izay hahagaga anao ny kalitaon'ny rakitra avoakany sy ny hery fanovana tsy ahafahanao manavaka ny antontan-taratasy notarafina sy ny tena izy.
Ka mandeha any izahay miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra hijerena antontan-taratasy izay ho hitantsika ao amin'ny iOS App Store hanovana ny iPhone ho scanner azo entina izay tsy mbola noeritreretinao akory.
Hanomboka amin'ny rindranasa tiako indrindra aho, CamScanner no iray nanome ahy ny valiny tsara indrindra tamin'ny safidiny maimaim-poana. Ny scanning antontan-taratasy noho ny CamScanner dia tena mora, satria manana teknolojia izay hampifanaraka haingana ny sary amin'ny endriny marina, noho izany dia tsy ho hita ratsy ireo sisiny. Raha vantany vao naka ny fisamborana izy dia manadihady ny antontan-taratasy, ary manana OCR ihany koa izay hahafantatra ny lahatsoratra amin'ny sary, na dia aloa aza io safidy io
Azontsika atao ny mitahiry ny fisie ao anaty PDF sy JPEG, araka ny safidintsika, ary ny zavatra ilaina indrindra dia ny fananany fampifanarahana amin'ireo rahona lehibe eny an-tsena.
Ny fanamarihana malaza sy ny fampiharana fitantanana dia tsy tokony hanana namana akaiky. Miresaka momba ny Scannable izahay izao, safidy hafa maimaim-poana izay azontsika ampiasaina miaraka amin'ny Evernote. Izy io dia mahavita scanning antontan-taratasy haingana, ankoatry ny fanovana azy ireo mora foana, zavatra tena ilaina. Azontsika atao ny manodina, mamoly ary manitsy ny sary mba ho mora vakina araka izay azo atao.
Etsy ankilany, ity fampiharana ity izy io koa dia afaka mamakafaka karatra fandraharahana ary mamorona fifandraisana amin'izy ireo, dia fiasa iray izay tsy manana ny sisa amin'ireo rindranasa hampiasaintsika anio ary mbola mitaona anao hahazo izany ambonin'ny hafa. Miaraka amin'ny fanohanan'ny Evernote, sarotra ny tsy matoky azy, ary ambonin'izany rehetra izany satria afaka ihany koa izy io.
Ny Microsoft alternativa. Ity koa dia iray amin'ireo ankafiziko indrindra, hamantatra ho azy ny sary ilaintsika ny maka sary azy mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Ny iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny Office Lens dia izany amboary ny antontan-taratasy mba ho azo vakina kokoa ireo litera, sarotra ny manao diso ny fakana sary ka ny Office Lens dia tsy mamantatra azy tsara ary mamorona antontan-taratasy saika tonga lafatra, izany no antony anolorana soso-kevitra be indrindra raha tsy mpaka sary sy mpaka sary ianao, raha ny marina.
Maimaimpoana koa io, fa ny lafiny ratsy dia hoe mametraka sakana be dia be rehefa manondrana antontan-taratasy raha tsy mampiasa Office 365 na Dropbox ianao, tsy dia manana fahalalahana betsaka amin'io faritra io izy, ary izany no antony lehibe indrindra nahatonga ahy nifidy ny CamScanner. Na izany aza, raha mampiasa ny tontolon'ny Microsoft Office na Dropbox ianao dia io no fampiharana tsara indrindra azonao ampiasaina, maimaimpoana ary atolotra anao.
Iray amin'ireo tranainy indrindra amin'ny iOS App Store. Ny safidy malalaka dia ahafahantsika mitahiry sy manondrana ao PDF ny sary rehetra malaza indrindra amin'ny rahona, Dropbox, Evernote, Yandex Disk, Box, OneDrive na Google Drive, Ka tsy ho diso anjara mihitsy ianao.
Izy io koa dia misy detection automatique edge, noho izany dia miovaova. Angamba izany dia noho ny interface, fa tsy tiako io, na izany aza iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny iOS App Store hatreto, noho izany dia tsy maintsy lazainay izy ireo ary atoro anao anao raha te hijery tsara ianao. Ary miaraka amin'izany, manao veloma antsika amin'ity sabotsy tolakandro ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny fampiharana tsara indrindra hijerena antontan-taratasy amin'ny iPhone-nao
Sunamy dia hoy izy:
Hanondro anao Scanbot aho, izay no tsara indrindra nandramako.
Valiny tamin'i Sunamy
sc163022 dia hoy izy:
Ny fampiharana tsara indrindra hijerena antontan-taratasy, tsy isalasalana, dia ny Scanner Pro!
Valiny amin'ny sc163022
Apple dia afaka mivarotra ny charger tsy misy tariby iPhone manaraka
AirDrop: ny fiasa tena haingana ary tsy fantatry ny mpampiasa maro